Ukwenza Iziphonso 6665
Ukwenza Iziphonso Lesi isipeletho singabhebhethekisa izinto futhi sikusize ulungise izinto. Uma uke waba nokuxabana nothile, noma nje ungezwani kahle nabo futhi ungathanda izimo ezinhle ongakha ngazo, lokhu kungaba iisipeletho obukade usifuna! Ngemuva kokuphonsa lesi isipeletho into yokuqala abantu abayiqaphelayo “ukuqondana kwezinto” okuningi okusiza ukubhebhethekisa izinto nokudala umoya ofanele wokwenza. Ngezinye izikhathi kuyasiza ukunenza nobabili nizimisele ngokwengeziwe ukulalela nokukhuluma ngezinto futhi nizilungise ngendlela eyakhayo, Ukwenza Iziphonso.
Uma ubuqedile ubudlelwano nomuntu futhi ngeke nje bakwamukele ukuthi kuphelile, uma beqhubeka bekushayela, bekubhalela, noma okubi kakhulu, uma beqhubeka beza, lokhu-ke kungaba yilesi siphonso ositholile kade ngifuna! Ngalesi isipeletho abantu abaningi bayawuzwa umuzwa wangaphakathi njengokuhefuzela okukhulu! Ngemuva kwalokho,
isithandwa esidlule siqala ukuzama ukuxhumana kancane kancane, futhi okuvame ukwenzeka ngokulandelayo ukuthi abanye abantu bazoqala ukuzibandakanya kulesi simo ngendlela yokuthi ukunakwa kwabathandi besikhathi esidlule kuphambukiswe kude kuwe futhi banomuntu noma okuthile okunye ukugxila amandla abo!
NextYenza umuntu akuthande